I-LG G7 ThinQ: Uyilo lwefowuni luye lwaphuma ngokupheleleyo | I-Androidsis
I-LG G7 ThinQ iya kuziswa ngokusesikweni ngoMeyi 2, ke akukho veki iseleyo. Isiphelo esiphakamileyo senkampani yaseKorea yenye yeefowuni ezivelise ezona ndaba zininzi. Inkcazo-ntetho yayo sele ikona, kodwa ifowuni iye yafumana ukuvuza okukhulu okwangoku. Ngenxa yokuba sele phakathi kwethu kuyilo olupheleleyo lwe-LG G7 ThinQ.
Ukuza kuthi ga ngoku unikezelo lwesixhobo belukhe lwavuza. Enkosi ngayo, sinokufumana umbono ombi wesixhobo. Kodwa, ngoku u-Evan Blass unoxanduva lokucoca uyilo. Ke ngumthombo onokuthenjwa.
Ukongeza, siyilo lwefowuni kuyo yonke into enokubakho. Ke le LG G7 ThinQ ayisazigcini iimfihlo kuthi. Amacala ebeyinxalenye esingakhange sikwazi ukuyibona esi sixhobo, kwaye ngoku siyabazi ngoku kuvuza. Kananjalo, ekugqibeleni sinokubona iqhosha lasekhohlo elifanele ukuba libe ngumncedisi okrelekrele okanye imisebenzi ye-smart.
Ngaphandle koko, uyilo lungaphezulu okanye ngaphantsi kwento ebesikhe sayicinga. KUNYEEsi siphelo siphezulu sizibophelele kubukho benotshi kwiscreen sayo. Iinkcukacha ezingenakugqiba abasebenzisi abakholisayo. Isikrini esinezakhelo ezincinci, kwaye sicinga ukuba iya kuba ngumlinganiso we-18: 9.
Ngasemva kwe-LG G7 ThinQ ikhamera ephindwe kabini kunye nesenzwa somnwe weminwe silindele. Ngale ndlela, akubangakho zinto zininzi zothusayo kwinkampani. Apho kukho utshintsho oluninzi kwiscreen nasemacaleni esixhobo.
Sele sineentsuku ezimbalwa de sibe siyazi ngokusesikweni le LG G7 ThinQ. Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yeefowuni ekulindeleke kakhulu kulo nyaka. Ngokukodwa emva kwawo onke amarhe malunga nophuhliso lwawo, oluye lwaba yinto ethe ngqo. Ucinga ntoni yoyilo oluphezulu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » LG » Ukucoca uyilo olupheleleyo lwe-LG G7 ThinQ